Uniteam Cruise – SET SAIL ON THE JOB OPPORTUNITY OF A LIFETIME
Career PartnerSet Sail on the Job Opportunity
At Uniteam Cruise Services we place amazing people into great jobs onboard. We work with the best Cruise Operators to provide fantastic working and long-term career opportunities.
If you can deliver excellence withasmile, then we might be able to help you improve your career. Find the right opportunity at UCS and take your chance.
See the job types
We are in Yangon, Myanmar and Limassol, Cyprus
We provide awesome career opportunities on Cruise ships
We are flexible, agile and committed to your success
We use our experience and network to source talent that everyone is proud of
Find Your Career Path Onboard...
Providing excellent dining services in all food & beverage venues onboard, withasmile. Waitress, waiter and bar person positions available. Hotel, restaurant, bar or previous cruise experience required.
Onboardaship, the kitchen is called the galley. Food is one of the most important aspects onacruise ship and must be produced with the highest quality. All levels of chefs considered as well as kitchen stewarding positions. Hotel, restaurant or previous cruise experience required.
Providing only the highest level of cleanliness and service in guest rooms and public areas. Also included is the laundry division. Positions available are housekeeping utility, cabin steward/stewardess, laundry person and stateroom attendant. Hotel or related housekeeping type experience required.
One of the perfect Cruise Ship careers service company’s in Myanmar. I love it very much!
Naing Tun - Housekeeping Team
Uniteam Cruise Services is the best for everyone. If you have dreams, just join Uniteam Cruise Services
Kyaw Lwin - Galley Team
Excellent service and excellent job
I was working in Qatar, Bahrain and Dubai - now thanks to UCS I am joining my first Cruise Ship in Germany. Thanks UCS!
Maung Nge - F&B Team
ယနေ့ ကျရောက်သော Day of the Seafarer ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့် “Uniteam Cruise Services” မှ “Career Development and Job Opportunity for Seafarers 2022” ပွဲကြီးကို Uniteam Building တွင်အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကြွရောက်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ယနေ့ မလာရောက်နိုင်သူများလည်း အလုပ်လျှောက်ထားလိုပါ ရုံးသို့လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း
Uniteam Cruise Services ... See MoreSee Less
ဒီ​ေန႔ ​ေမးသမ်ွ ကို စိတ္​႐ွည္​႐ွည္​ထားၿပီး ႐ွင္​းျပ​ေပးတဲ့ ဆရာသမားမ်ား အားလံုးကို​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​႐ွင္​့ 😊 သိခ်င္​တာ​ေတြ ကိုသိလိုက္​ရတဲ့တြက္​ uniteam ကို အထူးပင္​​ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​႐ွင္​့😌
အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းသစ်တွေ ​ေပးပါသော uniteam cruise services ဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေ...
ဒီနေ့မေးသမျှကိုစိတ်ရှည်ရှည်ထားပီးရှင်းလင်းပြသပေးတဲ့အတွက် ဆရာ ဆရာမတွေကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
Lovely group sir Naing
ဒီနေ့တစ်ကယ်ကို ဗဟုသုတလေးတွေ ရခဲ့ပါတယ်။အခုလို ပဲွလုပ်ပီး စိတ်ရှည်ရှည် ပြောပြ ရှင်းပြပေးခဲ့တာအတွက် ဆရာများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဗျာ။
၉ လပိုင်းလောက်လာလျှောက်မယ်နော် ခုတခြားနိုင်ငံမှာပဲရှိနေသေးလို့ TQ
တက်ရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်ဗျ၊ သိချင်တာတွေကို စိတ်ရှည်စွာဖြေကြားပေးပြီး ဧည့်ခံကျွေးမွေးတဲ့အတွက် လည်းများစွာ အားရကြေနပါမိပါတယ်၊ Uniteam family လည်း ကျန်းမာ၍ ကြီးပွားတိုးတက်ကြပါစေ။
စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ မသိတာေတြကို ျပန္လည္ ေဝမွ်ေပးလို႔ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ Long time Uniteam
Online က စာရင်းသွင်းလို့မရပါလား sir
CV ကို mail နဲ့တင်ထားပါတယ်ရလားရှင်
အဲ့ကပေးတဲ့cvမှာပဲဖြည့်ခဲ့ရတယ် ကျွန်တော်တို့cvတွေမယူထားလိုက်ဘူး... အဲ့လိုလားမသိဘူးနော်
Team UCS departed from Yangon for their cruise ship!
Best wishes to every one! Look for all opportunities to improve yourself and do your best.
#cruisejob #cruiseship #adventure ... See MoreSee Less
Congratulations and best wishes 🎊
ကိုတေcvတော့ ဗျူးတဲ့ထဲမပါ​းေ ၂ခါတင်ပီးပီ ၄​ခါလိုက်ဖူးတယ်good😒😒
Kaung Bon Tint Good Luck and best wishes!
Kaung Bon Tint ယျောင့် မင်းအချောဆုံးဟ
Excited to see Costa's new LNG-powered Flagship!
We are proud to be manning partners to Costa! If you have cruise or hotel experience and like the idea of work, travel, explore make sure you contact us! 🙏💪🛳
#cruisejob #uniteamcruise #adventure ... See MoreSee Less
နှစ်စဉ် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော Day of the Seafarer ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသောအားဖြင့် “Uniteam Cruise” မှ “Career Development and Job Opportunity for Seafarers 2022” ပွဲကြီးကို Uniteam Building တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ၎င်းနေ့တွင် အလုပ်လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်းကိုလဲ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် စိတ်ဝင်စားသူများ မပျက်မကွက် လာရောက် ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ လိုအပ်လျှက်ရှိသေးသော နေရာများမှာ
▪️ F&B Department အနည်းဆုံး လစာ 507 US$ မှ အများဆုံး 1850 Euro ထိ (လုပ်သက်အရည်အချည်းပေါ်မူတည်၍ လစာနှင့် ရာထူး အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်)
▪️ Kitchen Department အနည်းဆုံး လစာ 507 US$ မှ အများဆုံး 2500 Euro ထိ (လုပ်သက်အရည်အချည်းပေါ်မူတည်၍ လစာနှင့် ရာထူး အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်)
▪️ Housekeeping Department အနည်းဆုံး လစာ 507 US$ မှ အများဆုံး 1700 Euro ထိ (လုပ်သက်အရည်အချည်းပေါ်မူတည်၍ လစာနှင့် ရာထူး အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်)
▪️ Teppanyaki Cook အနည်းဆုံးလစာ 1200 US$ မှ အများဆုံး 3000 US$ (လုပ်သက်အရည်အချည်းပေါ်မူတည်၍ လစာနှင့် အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်) လျှောက်ထားမည့်သူများ ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်းပြ Short video အား တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာပေးနိုင်ပါက ပိုကောင်းပါသည်)
▪️ SPA Therapist အနည်းဆုံး လစာ 800 Euro မှ အများဆုံး 1700 Euro ထိ (လုပ်သက်အရည်အချည်းပေါ်မူတည်၍ လစာနှင့် ရာထူး အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်)
သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ပါအစီအစဉ်တွင် လာရောက်နိုင်ရန် အောက်ဖေါ်ပါ link တွင် ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
စာရင်းပေးသွင်းရန် Google Form Link:
နေ့ရက်: ၂၅.၀၆.၂၀၂၂ (စနေနေ့)
အချိန်: မနက် ၉း၃၀ မှ ညနေ ၃းဝဝ
လိပ်စာ: အမှတ် ၈၄၊ ၁၂ လွှာ (Rooftop)၊ ပန်းလှိုင်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်။ ... See MoreSee Less
Link ပြန်လုပ်ထားပါတယ် တချက် ပြန်ဝင်ကြည့်ပေးကြပါ။
kitchen ပိုင်းက ဘယ် position နဲ့ရှိလဲဗျာ
Link က ဝင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီအတိုင်းလေ့လာ စုံးစမ်းချင်လို့ လာခဲ့လို့ရလား ဗျ။
Form ျဖည့္ပီးပါပီ. Submit ႏွိပ္ပီး Thank you response. ေပၚပါတယ္. အာ့ဆို အဆင္ေျပလား႐ွင့္
Thank you uniteam.
Experience တော့မရှိသေးဘူး ဒါပေမယ့်ကြိုးစားပြီးလေ့လာသင်ချင်ပါတယ် နေ့ကအဲ့နေ့တစ်ရက်ထည်းလားရှိတာ
1) လူသစ်တွေကောလျှောက်လို့ရပါလား၊ 2) မိန်းကလေး ရော လျှောက်လို့ရပါလား ၊
Spa နဲလျောက်မလို့ပါ..oversea အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်
Link က ဝင်လို့လည်းမရဘူး။ ဘယ်လိုစာရင်းပေးရမလဲ
ပို့လိုက်ပါပီ ရောက်ရဲ့လားရှင့် ကျေးဇူးပြုပီးပြန်ပြောပေးပါနော်
Bar position န့ဲေခါ်ပါသလားခင်ဗျ
River လား sea လားဗျ
E speaking တော့သိပ့်မတတ်ဘူး
© UNITEAM CRUISES. ALL RIGHTS RESERVED